चिम – NEA Consumer Information
हामीले आफ्नो घरमा कस्तो किसिमको चिम प्रयोग गरेका र्छौ भन्ने कुराले पनि बत्तिको बिल बढ्ने वा घट्ने हुन जान्छ । कम उर्जा खपत गरि राम्रो प्रकाश दिने चिमको प्रयोगले बत्तिको बिल अत्यन्त प्रभावकारी रुपमा घटाउन सकिन्छ ।
के यहांहरुलाई धेरै उर्जा खपत गर्ने चिमबाट क्रमशः कम उर्जा खपत गर्ने चिममा कसरी चिममा बिकास भयो थाहा छ ? हामीले पहिले पहिले (कतिपय ठाउंमा अझै पनि) प्रयोगमा ल्याईरहेको एउटा साधारण फिलामेण्ट चिमले झण्डै ६० वाट बिजुली खपत गर्दथ्यो भने त्यसपछि प्रयोगमा आएको फलोरोसेण्ट ल्याम्प (ट्युबलाईट)ले जम्मा ४० वाट खपत गरि त्योभन्दा धेरै उज्यालो छर्न शुरु गर्यो ।
Source : Energy Efficiency Label (NEEP Handout)
झण्डै एक दशक अगाडि देखि नेपालमा सि.एफ.एल. र त्यसपछि एल.ई.डि लाईटको प्रयोग शुरु भए पश्चात बिजुली बचतमा आश्चर्यजनक प्रगति भएको छ । ४५० लुमेन्स (उज्यालो नाप्ने युनिट) प्रकाश पैदा गर्न ट्युवलाइटमा ४० वाट बत्ति खपत हुन्थ्यो भने त्यति नै बराबरको प्रकाश छर्न CFL लाईटले करिव १० युनिट बिजुली खपत गर्दछ भने LED ले झनै कम अर्थात चार वा पांच युनिट बिजुली मात्र खपत गर्दछ । यसरी नयां खालको चिमको आविष्कारले बत्तिले गर्ने बिजुली खपत दसौं गुणा कम गर्न सकिने भएको छ र यसको दिर्घकालिन फाईदा उठाउन हामी सबैले तुरन्तै आफुकहां भएका अन्य चिमहरुको साटो नयां खालका किफायति चिमहरुको प्रयोग शुरु गरि हाल्नु पर्दछ । यस्ता बत्तिहरु पहिलेका चिमको तुलनामा अत्यन्त धेरै समय समेत टिक्दछन्।
यिनै विशेषताहरुले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकहरुलाई पुराना खालका चिमको सट्टा नया खालका चिम प्रयोग गर्न लगाउन प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । प्रयोगमा नभएको कोठामा बत्ति निभाउने बानी बसाल्नाले पनि बिजुलीको बिल कम गर्नमा निकै सहायता गर्दछ । यस्तो बानी परिवारका सबै सदस्यले बसाल्नु पर्दछ । साथै यदि कुनै कोठामा पांच दस मिनेटकै लागि भए पनि कोहि नबस्ने भए बत्ति निभाउने गर्नुपर्दछ ।
जिरो वाटको बल्ब : हामीलाई कहिलेकाहिं अंध्यारा स्थानहरुमा चौबिसै घण्टा न्यून प्रकाशको बत्ति बालिरहनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि कतिपय ठाउंमा जिरो वाटको चिम बाल्ने प्रचलन छ । यो चिम जिरो वाट भनिएता पनि यसले १२ देखि १५ वाट सम्म बिजुलिको खपत गर्दछ । त्यस्ता अत्यावश्यक स्थानहरुमा लेड लाईट प्रयोग गर्नाले मात्र करिव एक दुई वाट बिजुली खपत गरी त्यति नै प्रकाश छर्दछ ।
साथै तिहार वा अन्य उत्सवहरुमा बाल्नको लागि यदि हामीले यो जिरो वाटको फिलामेण्ट बल्ब प्रयोग गर्ने गरेका छौं भने त्यो तुरुन्त बन्द गर्नु उपयूक्त हुन्छ किनभने यस्तो चिम ५० वटा बाल्नु भनेको यसका लागि मात्र झण्डै छ सात सय वाट बिद्युत खपत गर्नु हो जबकि आजकल त्यो भन्दा अत्यन्त आकर्षक देखिने लेड डेकोरेसन लाईटहरु (मसिना झिलिमिली बत्ति)ले अत्यन्त नगण्य बिजुलि खपत गर्दछ । त्यसैले डेकोरेसन लाईटका रुपमा यस्ता फिलामेण्ट बल्ब बाल्नुको साटो अन्य बत्ति बाल्न उपयूक्त हुन्छ । साथै किफायती बत्ति नै बालिएको अवस्थामा पनि रात छिप्पिदै गएपछि सुत्नु अघि यस्ता डेकोरेशन लाईट बन्द गर्न सकिन्छ ।
लेड बल्ब किन्दा त्यसमा रहेको IP Code पनि हेर्ने बानी बसाल्नु उपयूक्त हुन्छ । यस्तो IP Code का चार अक्षरमा (IP 00) पछिल्लो दुई अक्षरहरुले क्रमशः कति धुलो छिर्न दिंदैन र कति पानी छिर्न दिंदैन भन्ने कुरा बताउंछ । अघिल्लो अंक ६, अर्थात धुलोबाट पूर्ण सुरक्षा, पछिल्लो अंक अधिकतम ९, अर्थात पानीबाट पूर्ण सुरक्षा (यो दोश्रो अंक ६ मात्र हुंदा नै पनि पानी भित्र छिर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ) ।